ITourism Indaba ihlomulise iKZN ngoR260 million | Eyethu News
ITourism Indaba ihlomulise iKZN ngoR260 million
ITOURISM Indaba yaminyaka yonke yenzele isifundazwe saKwaZulu-Natali noMasipala weTheku izigidi ezilinganiselwa kuR260 ngalo mbukiso odonse izinsuku ezintathu e-Albert Luthuli International Conventions Centre eThekwini maduzane nje.
Abekhangisa amabhizinisi aseMlazi uNksz Sinenhlanhla Gama obekhangisa Eyadini Lounge no Nksz Thembeka Zikalala obekhangisa Umlazi Township Tourism kumbukiso wezamabhizinisi kowe-Tourism Indaba e-ICC ngeledlule . Isithombe:Thobile Zwane
Kulezi zigidi iTheku lithole uR60 kwathi uMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho nezokuVakasha noKongiwa kweMvelo tathola izigidi ezangama-R2000. Lezi kube yizindab ezimnandi kusodolobha uKhansela James Nxumalo, uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho nezokuVakasha KwaZulu-Natali uMnuz Michael Mabuyakhulu nokazwelonke wezokuVakasha uMnuz Derek Hanekom.
UMnuz Mabuyakhulu uthe Indaba iletha inkundla yokuthi amazwe ase- Afrika asebenze ndawonye ngoba iyimpumelelo kwezokuvakasha kuwo wonke amazwe .
“Ezokuvakasha kuyinto esesivivaneni ewukhiye emnothweni wethu nokuvulwa kwamathuba emisebenzi”, kusho uMnuz Mabuyakhulu. Imeya uMnuz Nxumalo ithe kuyinhlonipho futhi kuyajabulisa ukuthi iTheku kubey ilona elisingatha ezokuvakasha ngomcimbi osuthathwa njengomkhulukazi e-Afrika.
Le ngqungquthela isivumela ukuba sikwazi ukuncintisana emkhakheni wezokuvakasha futhi iletha ngqo izigidi zezimali ezingango R60 ngqo futhi engaqondile esiikhathi eside imali engango R260 million.”
UMnuz Hanekom uthe Indaba ikhomisa elikhulu iqhaza ekuthuthukisweni komnotho waseNingizimu Afrika ne-Afrika yonkana kanti izoheha izivakashi eziningi bese kudaleka amathuba emisebenzi.
“Inhloso yoMnyango wezokuVakasha ukuthi kwakheke izimo ezivumelana nokukhula komnotho nentuthuko kwezokuvakasha kuleli laseNingizimu Afrika. Lo mbukiso usuhehe futhi usazoqhubeka nokuheha abathengi base-Afrika yonkana,”kusho uMnuz Hanekom.
I-Indaba kuthiwa iqala ngesibalo esiyi- 5938 semihlangano ebiqhubeka eThekwini namaphethelo yize bekuqhubeka enkulu e-ICC. Abebezokhangisa ngemisebenzi yabo bebelinganiselwa e- 1047, abathengi beyi- 1856 kuthi abezindaba bebengama-724.
Bekukhona namabhizinisi aseMlazi abenezitendi zombukiso i-Eyadini Lounge, Maxis Lifestyle no- Umlazi Tourism.
Kuningi okusafanele kukhanyiselwe osomabhizinisi bakuleli ikakhulukazi abamnyama ngeTourism Indaba njengoba bekugqame kakhulu abaqhamuka emazweni ase-Afrika kunabaseNingizimu Afrika.
UMeya Nxumalo usonge ngokuthi le ngqungquthela ye-Indaba isivumela ukuthi abantu baseThekwini bakwazi ukuncintisana emkhakheni wesokuvakasha njengoba thi iletha ngqo izigidi zezimali ezingango R60 eThekwini. Kuningi okusalindelekile kulo mbukiso ngokuzayo.